Jehovha—Nzvimbo Yedu Yokugara | Yokudzidza
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Armenian (West) Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bicol Bislama Bulgarian Catalan Cebuano ChiSutu (Lesotho) Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Croatian Czech Dangme Danish Dutch Efik Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Haitian Creole Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Korean Kwangali Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Luo Malagasy Malay Maltese Mizo Moore Mutauro Wemasaini wokuAmerica Mutauro Wemasaini wokuArgentina Mutauro Wemasaini wokuBrazil Mutauro Wemasaini wokuColombia Mutauro Wemasaini wokuItaly Mutauro Wemasaini wokuJapan Mutauro Wemasaini wokuMexico Mutauro Wemasaini wokuRussia Myanmar Ndebele Ndonga Nepali Ngabere Norwegian Nzema Oromo Ossetian Pangasinan Polish Portuguese Punjabi Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Rarotongan Romanian Russian Samoan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swati Swedish Tagalog Tahitian Tajiki Tatar Thai Tigrinya Tsonga Turkish Twi Ukrainian Umbundu Uruund Uzbek Venda Vietnamese Waray-Waray Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yoruba Zulu
“Haiwa Jehovha, imi makava nzvimbo yedu yokugara chaiyo kwezvizvarwa nezvizvarwa.”—PIS. 90:1.
Jehovha akava sei ‘nzvimbo yokugara chaiyo’ yevarume vakatendeka vekare?
Tinogona kudzidzei kubva pakutendeka kwaAbrahamu?
Tingaratidza sei kuti Jehovha ndiye “nzvimbo yedu yokugara chaiyo”?
1, 2. Vashumiri vaMwari vanoona sei kugara kwavanoita munyika ino uye vane musha pakuti kudii?
UNONZWA wakadekara here munyika ino? Kana usinganzwi saizvozvo, hausi wega! Kubvira kare, vose vainyatsoda Jehovha vainzwa sokuti vaiva vaeni kana kuti vatorwa munyika ino. Somuenzaniso, vanamati vaMwari vakatendeka pavaitama-tama munyika yeKenani, “vakazivisa pachena kuti vakanga vari vaeni nevagari venguva duku.”—VaH. 11:13.
2 Vateveri vaKristu vakazodzwa avo ‘vachanogara kumatenga,’ vanozvionawo “sevatorwa uye vagari venguva duku” munyika ino. (VaF. 3:20; 1 Pet. 2:11) “Mamwe makwai” aKristu ‘haasiwo enyika, saJesu aisava wenyika.’ (Joh. 10:16; 17:16) Zvisinei, vanhu vaMwari vanewo musha wavo. Kutaura zvazviri, tinogara mumusha unotidzivirira kupfuura mimwe yose uye munoratidzwa rudo, uye musha uyu unongoonekwa nevane maziso okutenda chete. Mosesi akanyora kuti: “Haiwa Jehovha, imi makava nzvimbo yedu yokugara chaiyo kwezvizvarwa nezvizvarwa.” * (Pis. 90:1) Jehovha akava sei ‘nzvimbo yokugara chaiyo’ yevashumiri vake vakavimbika vekare? Iye ‘inzvimbo yokugara chaiyo’ yevanhu vanoshevedzwa nezita rake mazuva ano pakudii? Uye acharatidza sei kuti ndiye chete nzvimbo yokugara yakachengeteka mune ramangwana?
JEHOVHA AIVA ‘NZVIMBO YOKUGARA CHAIYO’ YEVASHUMIRI VAKE VEKARE
3. Pana Pisarema 90:1 pane musoro wenyaya upi, unofananidzwa nani, uye zvakafanana papi?
3 Kungofanana nezvirungamutauro zvakawanda zviri muBhaibheri, Pisarema 90:1 rine musoro wenyaya, zvauri kufananidzwa nazvo uye pazvakafanana pacho. Musoro wenyaya ndiJehovha. Ari kufananidzwa nenzvimbo yokugara. Jehovha akafanana nezvimbo iyoyo pane zvakawanda. Somuenzaniso, Jehovha anodzivirira vanhu vake. Izvi zvinoenderana nepfungwa yokuti iye ndiye rudo. (1 Joh. 4:8) Iyewo ndiMwari worugare, anoita kuti vakavimbika vake ‘vagare vakachengeteka.’ (Pis. 4:8) Somuenzaniso, chimbofunga zvaakaitira vashumiri vake vakatendeka vekare, kutanga naAbrahamu.
4, 5. Mwari akaratidza sei kuti aiva ‘nzvimbo yokugara chaiyo’ kuna Abrahamu?
4 Tinogona kungoita zvokufungidzira manzwiro akaita Abrahamu, uyo panguva iyoyo ainzi Abramu, paakaudzwa naJehovha kuti: “Buda munyika yako ubve kuhama dzako . . . uende kunyika yandichakuratidza.” Kana Abrahamu akambonetseka nazvo, hapana mubvunzo kuti akazogadzikana Jehovha paakawedzera kuti: “Ndichaita rudzi rukuru runobva mauri, ndichakukomborera, ndichaita kuti zita rako rive guru . . . Ndichakomborera vaya vanokukomborera, ndichatuka anokutuka.”—Gen. 12:1-3.
5 Nemashoko iwayo, Jehovha akavimbisa kuti aizova nzvimbo yokugara yakachengeteka yaAbrahamu uye yevana vake. (Gen. 26:1-6) Jehovha akazadzisa zvaakavimbisa. Somuenzaniso, akaita kuti Farao weIjipiti uye Mambo Abhimereki weGerari vasabata Sara chibharo uye vasauraya Abrahamu. Akadzivirirawo Isaka naRibheka saizvozvo. (Gen. 12:14-20; 20:1-14; 26:6-11) Tinoverenga kuti: “[Jehovha] haana kubvumira kuti chero munhu upi zvake avabiridzire, asi akatsiura madzimambo nokuda kwavo, achiti: ‘Musabata vazodziwa vangu, musaitira vaprofita vangu chinhu chakaipa.’”—Pis. 105:14, 15.
6. Isaka akaudza Jakobho kuti aitei uye Jakobho anofanira kunge akanzwa sei?
6 Vaprofita ivavo vaisanganisira muzukuru waAbrahamu Jakobho. Nguva yokuti Jakobho aroore payakasvika, baba vake Isaka vakamuudza kuti: “Usatora mudzimai pavanasikana veKenani. Simuka, enda kuPadhani-aramu kuimba yaBhetueri baba vaamai vako utore mudzimai ikoko pavanasikana vaRabhani.” (Gen. 28:1, 2) Jakobho akabva angoteerera Isaka. Akabva mumhuri yake maaigara akachengeteka vari muKenani, akafamba zvimwe ari oga makiromita ane mazana akananga kuHarani. (Gen. 28:10) Zvimwe aifunga kuti: ‘Ndichapedza nguva yakareba sei ndisiri kumba? Sekuru vangu vachandigamuchira nemufaro uye vachandipa mudzimai anotya Mwari here?’ Kana Jakobho ainetseka nepfungwa idzi, hapana mubvunzo kuti dzakapera paakasvika kuRuzi, makiromita anenge 100 kubva kuBheeri-shebha. Chii chakaitika ari kuRuzi?
7. Jakobho akavimbiswei naMwari ari kuhope?
7 Jakobho ava kuRuzi, Jehovha akazviratidza kwaari muhope, achiti: “Tarira ndinewe, ndichakuchengeta parwendo rwako rwose rwauri kufamba uye ndichakudzosa panyika ino, nokuti handizokusiyi kusvikira ndaita zvandataura kwauri.” (Gen. 28:15) Mashoko iwayo emutsa anofanira kuva akasimbisa uye akanyaradza Jakobho chaizvo! Uri kumuona here ava kufamba, achitarisira kuona kuti Mwari aizozadzisa sei shoko rake? Kana wakabva pamba, zvimwe kuti unoshumira kune imwe nyika, pamwe unonzwisisa manzwiro aiita Jakobho. Asi zviri pachena kuti wakaona kuti Jehovha anokutarisira sei.
8, 9. Jehovha akaratidza sei kuti ‘inzvimbo yokugara chaiyo’ kuna Jakobho, uye tinogona kudzidzei?
8 Jakobho paakasvika kuHarani, sekuru vake Rabhani vakamugamuchira nemufaro uye vakazomupa Riya naRakeri kuti vave madzimai ake. Zvisinei, nokufamba kwenguva Rabhani akaedza kudzvinyirira Jakobho nokuchinja mubayiro wake kagumi! (Gen. 31:41, 42) Asi Jakobho akatsungirira zvakaipa zvose izvi, achivimba kuti Jehovha aizoramba ainaye, uye chokwadi akaramba ainaye! Zvechokwadi, Mwari paakazoudza Jakobho kuti adzokere kuKenani, ainge ava “nemapoka makuru ezvipfuwo nevashandikadzi nevashandirume nengamera nembongoro.” (Gen. 30:43) Jakobho akanyengetera achitenda chaizvo kuti: “Handikodzeri kuwana mutsa wose worudo nokutendeka kwose zvamakaitira mushumiri wenyu, nokuti ndakayambuka rwizi rwaJodhani urwu nomudonzvo wangu chete asi zvino ndava mapoka maviri.”—Gen. 32:10.
9 Chokwadi mashoko omunyengetero waMosesi aiva echokwadi okuti: “Haiwa Jehovha, imi makava nzvimbo yedu yokugara chaiyo kwezvizvarwa nezvizvarwa”! (Pis. 90:1) Mashoko iwayo achiri kushandawo mazuva ano, nokuti Jehovha, uyo ‘asingambochinji sokufamba kunoita mumvuri,’ achiri nzvimbo yokugara inoratidzwa rudo uye yakachengeteka yevanhu vake vakavimbika. (Jak. 1:17) Ngationei kuti anodaro sei.
JEHOVHA NDIYE “NZVIMBO YEDU YOKUGARA” MAZUVA ANO
10. Nei tingava nechokwadi chokuti Jehovha anoramba ari nzvimbo yokugara yakachengeteka yevashumiri vake?
10 Fungidzira izvi: Uri kupa umboo mudare redzimhosva nezvezviri kuitwa nesangano rematsotsi riri munyika yose. Mukuru wavo akangwara chaizvo, ane simba, anoreva nhema dzemakoko uye zimhondi. Waizonzwa sei pawaizobuda mudare zuva iroro? Waizonzwa wakachengeteka here? Kana! Chokwadi waitozova nechikonzero chokukumbira kudzivirirwa. Muenzaniso uyu unoratidza zvinoita vashumiri vaJehovha vanomupupurira noushingi uye vasingatyi kufumura muvengi wake mukuru ane utsinye, Satani! (Verenga Zvakazarurwa 12:17.) Asi Satani ave achikwanisa here kunyaradza vanhu vaMwari? Kwete! Tinotoramba tichibudirira pakunamata nemhaka yechikonzero chimwe chete chokuti: Jehovha achiri nzvimbo yedu yokupotera, “nzvimbo yedu yokugara chaiyo,” kunyanya mumazuva ano okupedzisira. (Verenga Isaya 54:14, 17.) Asi kana tikabvumira Satani kutinyengedza kuti tibude munzvimbo yedu yokugara, Jehovha haangavi nzvimbo yedu yokugara yakachengeteka.
Ngirozi dzaMwari dzinotsigira uye dzinodzivirira vashumiri vake
11. Tinogona kudzidzei kuvashumiri vaMwari vekare?
11 Ngationei chimwezve chatingadzidza kuna Abrahamu, Isaka, naJakobho. Kunyange zvazvo vaigara munyika yeKenani, vakaramba vakaparadzana nevanhu vomunyika iyoyo nokuti vaivenga mararamiro avo ounzenza uye akaipa. (Gen. 27:46) Varume ava vaisava nechikonzero chokuti vaitirwe mitemo yakawanda-wanda. Zvavaiziva nezvaJehovha uye maitiro ake zvainge zvakavakwanira. Vaisatomboda kuva pedyo nenyika nokuti Jehovha aiva nzvimbo yavo yokugara. Asi vaiedza nepavaigona napo kutambira kure nayo. Chokwadi vakatisiyira muenzaniso wakazonaka! Unoedza kutevedzera vashumiri vaMwari vekare ivavo vainge vakatendeka here paunosarudza shamwari uye zvinokuvaraidza? Zvinosiririsa kuti muungano yechiKristu vamwe vane kakudekara munyika yaSatani. Kana uchitombonzwa saizvozvo, nyengetera nezvenyaya yacho. Yeuka kuti nyika ino ndeyaSatani. Inoratidza mafungiro ake asina rudo, ekuzvifunga.—2 VaK. 4:4; VaEf. 2:1, 2.
12. (a) Jehovha anotarisira sei veimba yake? (b) Unonzwa sei nezvaanotipa?
12 Kuti tisakundwa nemanomano aSatani, tinofanira kunyatsoshandisa urongwa hwokunamata hwaJehovha hwaanoitira veimba yokutenda, vaya vanoita kuti ave nzvimbo yavo yokugara. Izvi zvinosanganisira misangano yechiKristu, kunamata kwemhuri uye “zvipo zviri varume,” kureva vafudzi vakagadzwa naMwari kuti vatinyaradze uye vatitsigire patinosangana nematambudziko muupenyu. (VaEf. 4:8-12) Hama George Gangas, avo vaiva nhengo yeDare Rinodzora kwemakore, vakanyora kuti: “Kana ndine [vanhu vaMwari] ndinonzwa ndakadekara sokuti ndine vomumhuri yangu, ndiri muparadhiso yokunamata.” Ndiwo manzwiro aunoitawo here?
13. Chidzidzo chipi chinokosha chatinogona kuwana pana VaHebheru 11:13?
13 Chimwe chinhu chatingatevedzera chaiitwa nevashumiri ava vaMwari vekare ndechokuti vaiva nechido chokusiyana nevamwe vose. Sezvataona mundima 1, “vakazivisa pachena kuti vakanga vari vaeni nevagari venguva duku munyika yacho.” (VaH. 11:13) Wakatsunga kuratidza kuti wakasiyana nevamwe here? Ichokwadi kuti kudaro hakusi nyore nguva dzose. Asi uchibatsirwa naMwari uye uchitsigirwa nevamwe vaKristu vaunonamata navo, unogona kubudirira. Yeuka kuti hausi wega. Vose vanoda kushumira Jehovha vari muhondo yacho! (VaEf. 6:12) Asi tinogona kukunda muhondo yacho kana tikavimba naJehovha uye tikamuita nzvimbo yedu yokugara yakachengeteka.
14. Vashumiri vaJehovha vaimirira “guta” ripi?
14 Uyewo chimwe chinhu chinokosha ndeichi: Tevedzera Abrahamu nokuita kuti maziso ako arambe akatarira mubayiro. (2 VaK. 4:18) Muapostora Pauro akanyora kuti Abrahamu “akanga achimirira guta rine nheyo chaidzo, iro Mwari ari muvaki nomuiti waro.” (VaH. 11:10) “Guta” iroro rakazova Umambo hwaMesiya. Ichokwadi kuti Abrahamu aifanira kumirira “guta” kana kuti Umambo ihwohwo. Asi isu hatifaniri kuhumirira. Huri kutotonga kudenga. Uyezve, uchapupu hwakawanda hunoratidza kuti pasina nguva huchatanga kutonga nyika yose. Unobvuma here kuti Umambo ihwohwo huri kutonga? Hune zvahunoita here pamaonero aunoita upenyu, nyika ino uye zvaunokoshesa?—Verenga 2 Petro 3:11, 12.
“NZVIMBO YEDU YOKUGARA CHAIYO” MUGUMO ZVAUNOSWEDERA
15. Chii chichaitika mune ramangwana kune vaya vanovimba nenyika ino?
15 Nyika yaSatani painenge yava kuda kuguma, “marwadzo enhamo” achatowedzera. (Mat. 24:7, 8) Zvinhu zvichatowedzera kuipa munguva yokutambudzika kukuru. Zvinhu zvinokosha zvoupenyu zvichaparara uye vanhu vachange vachityira upenyu hwavo. (Hab. 3:16, 17) Vapererwa, vachaita sokuti vari kutsvaka nzvimbo yokupotera “mumapako nomumatombo makuru omumakomo.” (Zvak. 6:15-17) Asi hapana mapako chaiwo kana kuti masangano ezvematongerwo enyika uye ezvokutengeserana akaita semakomo achakwanisa kuvadzivirira.
16. Tinofanira kuona sei ungano yechiKristu uye nei tichifanira kudaro?
16 Zvisinei, vanhu vaJehovha vacharamba vakachengeteka vari ‘munzvimbo yavo yokugara,’ iye Jehovha Mwari. Sezvakaita muprofita Habhakuki, ‘vachapemberera Jehovha nomufaro.’ ‘Vachafarira Mwari wokuponeswa kwavo.’ (Hab. 3:18) Jehovha achava sei “nzvimbo yedu yokugara chaiyo” panguva iyoyo yakaoma? Tichafanira kumirira toona kuti achazviita sei. Asi tinogona kuva nechokwadi chokuti: Sezvakaita vaIsraeri pavaibuda muIjipiti, “boka guru” richaramba rakarongeka, uye rakanyatsogadzirira kuudzwa zvokuita naMwari. (Zvak. 7:9; verenga Eksodho 13:18.) Mwari achatipa mirayiridzo iyoyo zvimwe achishandisa urongwa hweungano. Zvechokwadi, zviuru zveungano pasi rose zvinoita sokuti ndizvo zvinotaurwa ‘sedzimba dzomukati’ dzakachengeteka dzakagara dzataurwa pana Isaya 26:20. (Verenga.) Unokoshesa misangano yeungano here? Unokurumidza kuteerera mirayiridzo inopiwa naJehovha achishandisa urongwa hweungano here?—VaH. 13:17.
17. Jehovha ‘inzvimbo yokugara chaiyo’ kunyange kuvashumiri vake vakavimbika vakafa pakudii?
17 Kunyange vaya vangafa vakatendeka kutambudzika kukuru kusati kwatanga, vacharamba vakachengeteka muna Jehovha, ‘nzvimbo yavo yokugara chaiyo.’ Nei tichidaro? Papera makore akawanda kubva pakafa Abrahamu, Isaka, naJakobho, Jehovha akaudza Mosesi kuti: “Ndini Mwari . . . waAbrahamu, Mwari waIsaka naMwari waJakobho.” (Eks. 3:6) Jesu akadzokororawo mashoko iwayo, akabva awedzera kuti: “Iye haasi Mwari wevakafa, asi wevapenyu, nokuti kwaari vose vapenyu.” (Ruka 20:38) Chokwadi, Jehovha, anotoona vashumiri vake vakafa vakatendeka sevapenyu; achava nechokwadi chokuti avamutsa.—Mup. 7:1.
18. Munyika itsva, Jehovha achava sei ‘nzvimbo yokugara chaiyo’ yevanhu vake?
18 Munyika itsva yava pedyo, Jehovha achava ‘nzvimbo yokugara chaiyo’ yevanhu vake mune imwe pfungwa. Zvakazarurwa 21:3 inoti: “Tarirai! Tende raMwari riri pakati pevanhu, iye achagara navo.” Kutanga, Jehovha achagara nevanhu vake panyika achimiririrwa naKristu Jesu. Pachapera makore ane chiuru, Jesu achagamuchidza Umambo kuna Baba vake, pashure pokunge azadzisa chinangwa chaMwari chokusika nyika. (1 VaK. 15:28) Uye vanhu vanenge vakwana vachange vasingachadi Jesu kuti ave murevereri wavo; nokuti Jehovha achange ava navo. Chokwadi pamberi apa pane zvinhu zvakazonaka! Saka panguva ino, ngatiedzei kutevedzera vashumiri vaMwari vekare vainge vakatendeka nokuita kuti Jehovha ave “nzvimbo yedu yokugara chaiyo.”
^ ndima 2 Pana Pisarema 90:1, Contemporary English Version inoti: “Ishe wedu, mave muri musha wedu kwezvizvarwa nezvizvarwa.”